Hurumende yeMubatanidzwa Yoitiswa Zinyekenyeke naVaMugabe
Kukadzi 25, 2009
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti kudomwa kwakaitwa vanyori vemapazi nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, hakuzi pamutemo, uye kunozvidza chibvumirano chekuvaka hurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vanoti VaMugabe vakaita izvi vega neChipiri vachityora chibvumirano chakanyoreranwa nemapato ose ari matatu muna Gunyana. Vatiwo pachine dzimwe nyaya dzakati kuti dziri kupa kuti ivo naVaMugabe vasawirirane. Vati panofanirwa kugovanwa magavhuna, vamiriri vekune dzimwe nyika, pamwe nevanyori vemapazi ehurumende.
Imwe nyaya yataurwa naVaTsvangirai iri kuda kugadziriswa, ndeye kugadzwa kwakaitwa gavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe nekugadzwa kwemuchuchisi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, izvo vanoti zvakaitwa nenzira isingaremekedzi chibvumirano chavakanyorerana.
Vatiwo vakawirirana naVaMugabe kuti vari kutarisirwa kuva mutevedzeri wegurukota rezvekurima, uye vari mubatii wehomwe muMDC, VaRoy Bennet, vanofanirwa kupihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba kwavo, asi magweta ehurumende ari kuramba kutevedza izvi.
Vasati vatora mhiko yekushanda muhurumende yemubatanidzwa, VaTsvangirai vakati vaizopinda muhurumende iyi chete kana vasungwa vese vezve matongerwo enyika vaburitswa muhusungwa. Vari munhusungwa kunze kwaVaBennet, vanosanganisira mutungamiri weZimbabwe Peace Project, Muzvare Jestina Mukoko, pamwe nedzimwe nhengo dzeMDC.
VaTsvangirai vanga vachitsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo, VaArthu Mutambara.